Isamsung iyayeka ukuvelisa izikrini ze-LCD kulo nyaka | Iindaba zeGajethi
Kubonakala ngathi iindaba malunga nemveliso ye- Izikrini zeLCD Okanye isigqibo sokuyeka ukuvelisa ezi zikrini nge-Samsung Display, sinokuchaphazela iinkampani ezininzi ezinkulu kwihlabathi jikelele kwaye oku kubandakanya iinkampani ezifana ne-Apple, umzekelo.
Ngokweakhawunti Reuters Esi sigqibo siza kuqinisekiswa ngokusesikweni yinkampani yaseMzantsi Korea kwiinyanga ezizayo kwaye izakubeka bucala itekhnoloji engaphezulu kokucinezelwa ngokokutsho kweengcali ezithile, nangona uninzi luthi luyasebenza izixhobo ezininzi kule mihla.
1 I-OLED kunye ne-AMOLED iya kuba kuphela kwento abayivelisayo ngokwala marhe
2 Ukubonelela ngeenkampani kude kube seMilanese yonyaka
I-OLED kunye ne-AMOLED iya kuba kuphela kwento abayivelisayo ngokwala marhe
Kwaye izikrini zeLCD zisetyenziswa kwizixhobo ezininzi kodwa itekhnoloji yeselfowuni yeyona okanye yayiyeyona iphambili. Ngokuhamba kwexesha, izixhobo eziphathwayo ziyaphulukana nomphunga ngokubhekisele kufakelo lolu hlobo lwezikrini (ngakumbi ezo zikumgangatho ophakathi) kunye nokunyuka ngokuthe ngqo Imiboniso ye-OLED okanye ye-AMOLED.
Ezi ndaba okanye amarhe akhutshwe yiReuters kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo awabambi mntu kwakhona kuba kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo imigca yemveliso yenkampani yayisele itshintsha imigca yendibano yazo ukuvelisa iipaneli ezininzi ze-OLED kunye ne-AMOLED kuneepaneli ze-LCD, ke ukuqinisekiswa kwale ndlela ayenzi nto engaphezulu kwe qinisekisa oko sele kuvuza Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kwimithombo yeendaba ekhethekileyo.
Ukubonelela ngeenkampani kude kube seMilanese yonyaka
Akubonakali ngathi oku kusikwa kwimveliso yeescreen zeLCD kunokuchaphazela iinkampani ezinkulu ezinje ngeApple, ethi ibone esi sigqibo sisiza nayo iqinisekise izivumelwano nabanye abathengisi bekhusi kunye nokubheja kwitekhnoloji ye-mini-LED yescreen. Ngale ndlela izixhobo ezinokufaka ezi zikrini zeLCD zinakho yi mini-LED Kwiinyanga ezizayo kodwa akukho bungqina busemthethweni koku nokuba kungubani na onoxanduva lwenkampani.
Okucacileyo kukuba iSamsung iqinisekisa ukubonelelwa kolu hlobo lwepaneli kubathengi bayo kude kube sekupheleni kwalo nyaka kwaye ngokucacileyo kude kube kuphela isitokhwe. Nje ukuba le mihla idlulile, ngokuqinisekileyo bayakuyeka ukubonelela abathengi ngezi panels kuba imigca yemveliso iya ngqo kwiiphaneli ze-OLED kunye ne-AMOLED. Ngokuqinisekileyo ezinye iinkampani ezenza imveliso yesikrini nazo zinokutsiba kwiinyanga ezimbalwa ezizayo okanye mhlawumbi kunyaka olandelayo, into ecacileyo yeyokuba iipaneli zeLCD zihlala ngaphandle kwemigca yemveliso ukusuka kwi-Samsung.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Isamsung iyayeka ukuvelisa izikrini ze-LCD kulo nyaka
Ezonaapps zilungileyo zeqela leefowuni zevidiyo